Banana Peel aad uwanaagsan - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • QODOBO • beauty • Caadooyinka wanaagsan • rasiidhada • Daawooyinka dabiiciga ah Banana Peel aad iyo aad u faa'iido badan
Weligaa Marnaba U Joojin Doonta Si Banaan Ay Loogu Jirto Mar Kale Markaad Aragtid
Muuska waa mid ka mid ah midhaha ugu caafimaadka waxa aad cuni kartaa, la raran protein, fiber, vitamins A, B6, iyo C, potassium, manganese, magnesium, folate, riboflavin, niacin, iyo bir. Waxay sidoo kale ka fiicnaanayaan oo ay u sahlanaan karaan inay qabtaan-iyo-tagaan. Muuska yihiin delicious on iyaga u gaar ah, ujeedada badarka xunna kordhay, salad miro, jalaatada iyo xataa.
Laakiin maahan maanta halkan si aan uga hadalno muuska miro, laakiin halkii ay diirran tahay. Guud ahaan tuuraa sida qashinka, qolofka mooska waa la cuni karo iyo Dhab Bixi Kumaan dhan faa'iidooyinka caafimaad ku daray. Yaabay? Sida ay soo baxday, dadku u isticmaalaan qolofka mooska in la horumariyo dheefshiidka, kolestaroolka hoose, iyo bogsiiyo dhibaatooyinka maqaarka caadiga ah.
Waxaad labadiinaba cuni kartaa muuskaaga oo aad si toos ah ugu adeegsan kartaa si aad u aragto faa'iidooyinka. Ugu yaraan hal dalab oo macquul ah ma laha wax la xiriira jirkaada oo dhan.
Hal sheey aan hubo - waxaad joojin doontaa tuuraya qolfaha sha qiimo qashinka-ka dib marka aad wax walba u cajiib ah waxay samayn karaa ogaado. Faa'iido # 5 si daacad ah ayuu u wanaajin karaa wax kasta oo ku saabsan noloshaada!
source: http: //hhdresearch.org/never-throw-away-a-banana-peel/ utm_source = & utm_medium = le10sport taboola & utm_campaign = 314_hhd_bananapeel_world & utm_content = 170161892